Ọhụrụ Windows 10 melite na-enye nsogbu na Kobo eReaders | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Ọhụrụ Windows 10 melite na-enye nsogbu na Kobo eReaders
Joaquin Garcia | | ndị na-agụ akwụkwọ, Kobo, software
Fewbọchị ole na ole gara aga Microsoft wepụtara mmelite maka Windows 10, mmelite a maara dị ka Windows 10 Ncheta ncheta. Mmelite a na-eji nwayọọ nwayọọ abanye na kọmputa ndị ọrụ mana ọ na - ewetara ha nsogbu, ihe na - emeghị tupu mmelite ahụ.
Ọtụtụ ndị ọrụ achọpụtala na mgbe emelite Windows 10, kọmputa m na-akwụsị ịmata ihe ndị Kobo na ọ pụrụ ọbụna ime ka ha ghara iji ya eme ihe ebe ọ bụ na n'ọtụtụ ọnọdụ ọ na-enye iji hazie ncheta na mmebi mebiri.
Nwelite Windows 10 nwere nsogbu ma nwekwaa ike maka ndị ọrụ Kobo eReader maka oge ahụ na rue Septemba ga-abụrịrị na-enweghị eReader ha. Ọtụtụ ndị ọrụ akpọtụrụla ọrụ nkwado Kobo na n'ezie nsogbu ahụ sitere na mmelite ahụ, ihe ga-abụ ndozi Microsoft site n'ọnwa Septemba Mana ọ bụrụ na, Kobo ga-ewepụta mmelite maka eReaders ya nke ga - eme ka ha dakọtara na nsogbu a, n'ụzọ ọ bụla mgbe ị na - ejikọ na Windows 10, eReader ghọtara ma ọ bụghị nsogbu.
Kobo na-arụ ọrụ na mmelite iji dozie nsogbu maka ndị ọrụ ya
Ọ bụ ezie na nke a bịarutere, e nwere ụzọ ndị ọzọ dị ka weghachite kọmputa ahụ na isi mmalite iji melite Windows 10, jiri ihe nchọgharị eReader were budata ebook site na igwe ojii nke igwe ojii ma ọ bụ jiri sd kaadị na ngwaọrụ ndị nwere ya. Ihe ngwọta ndị a dị irè maka ụfọdụ mana ọ bụghị maka ndị ọrụ novice na ọ bụ nnukwu nsogbu.
N'ọnọdụ ọ bụla, eReaders abụghị naanị ngwaọrụ ndị nwere nsogbu na Windows 10 melite, kamera weebụ na-enyekwa nsogbu ma dịka ndị a, ọ bụghị ụdị niile nwere nsogbu. O doro anya Amazon eReaders enweghị nsogbu jiri Windows kachasị ọhụrụ yana kamera Microsoft Microsoft. All nnọọ iju na nnọọ manụ maka ọgwụgwụ ọrụ Not cheghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » Hardware » ndị na-agụ akwụkwọ » Ọhụrụ Windows 10 melite na-enye nsogbu na Kobo eReaders
Ọ bụrụ na ị jikọọ Amazon Kindle na USB 3.0 ọdụ ụgbọ mmiri nke kọmputa na W10 ncheta ncheta, kọmputa ahụ na-acha anụnụ anụnụ ozugbo (BSOD). Ọ dị ka USB 2.0 ọ naghị eme.
Ọzọ Microsoft na-ekpuchi onwe ya n'ebube.
Otu ihe ahụ na-eme m, echere m na ọ bụ naanị PC m mana ugbu a ị kwuru ya ọ ga-abụrịrị maka mmelite Windows 10 AU.
Ejikọtara m ya na pc wee gbanye PC, ọ na-arụ ọrụ ahụ n'ụzọ ahụ.
Ọ mere m ụbọchị ọzọ, aghaghị m ijikọ Kobo H2O na PC ọzọ iji nwee ike itinye akwụkwọ
Mgbe emelitere Windows m na Windows 10 na Ọktọba 2016 yana ọbụlagodi mgbe emelitere mmelite ndị ọzọ, m gara n'ihu na Jenụwarị 2017 na-enweghị ike ịbanye na Kobo Glo HD site na eriri, ọ na-agwa m mgbe niile na ọ nweghị ike ịnweta.
Ọrụ teknụzụ nke Kobo na Windows ekwutọla m, na-ekwu na nke ọzọ bụ ụta ma ha enyeghị m azịza.
Ugbu a ana m ejikọ Caliber site na Wi-Fi ma ọ bụ naanị mgbe ahụ ka m nwere ike itinye ma ọ bụ wepu akwụkwọ.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla maara otu esi edozi ya (Achọrọ m n'enweghị ihe ịga nke ọma), m ga-enwe ekele maka ụfọdụ nduzi.
Zaghachi Ángel Martínez
Ndị na-agụ akwụkwọ anyị ga-ama ụdị ọhụụ nke gam akporo?
Amazon agwụla na ọkụ nke Fire 8 HD